မန္တလေး၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမာန်တော်ကြီးတွင် သံဃာတော်များ သပိတ်မှောက်( နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ ) | မိုးဇက်
မန္တလေး၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမာန်တော်ကြီးတွင် သံဃာတော်များ သပိတ်မှောက်( နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ )
Posted on Tuesday, 15 November 2011
မန္တလေး သပိတ်မှောက်သံဃာအရေးအခင်းကို သတင်းယူ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို ရိုက်သော သတင်းထောက် အချို့အား ထောက်လှမ်းရေး ဆိုသူများက လိုက်လံချောင်းမြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြေရာခံခြင်းများရှိဟု အလိုက်ခံရသူ သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ပြောကြားပါသည်။
"Tomorrow 12 AM, old Masoerein campaign will take part in! Please forward" ဆိုသော စာသားများ မန္တလေးမှ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်သူအချင်းချင်း ဖြန့်ဝေနေကြ။
ယနေ့ မန္တလေးတွင် သံဃာငါးပါး ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြကာ လူအများစုဝေးခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့ည မန္တလေး၊ ၈၄ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းထောင့်ရှိ ဓမ္မသာလခန်းမတွင် ည (၇)နရီ၌ စတင်ကျင်းပမည့် စာပေဟောပြောပွဲ (သိုက်ထွန်းသက်၊ အော်ပီကျယ်) ကို ကြံ့ဖွတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်ခဲ့သောကြောင်း ဓမ္မသာလခန်းမလာ ဟောပြောပွဲပရိသတ်များ ခန်းမရှေ့ရောက်မှ လှည့်ပြန်သွားရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစာပေဟောပြောပွဲမှာ ၂၀၁၁၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်ကတည်းက တစ်ည စာရေးဆရာ ၂ ယောက် (သို့မဟုတ်) ၃ ယောက်နှုန်းဖြင့် အထက်ပါ နေရာတွင် ကျင်းပခွင့်ရလာခဲ့သော်လည်း ယခု နိုဝင်ဘာ ၁၅ ည တွင်မှ ယခုလို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲပရိသတ်များ မချင့်မရဲဖြစ်ခဲ့ကြသည် ဆို၏။
This entry was posted in သတင်း by Black. Bookmark the permalink.
ချစ်ခြင်းကဗျာ ၊ ၁ ၊
မန္တလေး၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမာန်တော်...
ဒို့မြေ - ဒို့ကမ္ဘာ ဘယ်လိုထိမ်းကြပါ့မလဲ
မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်ရွာလုံးဆိုင်ရာ တတိယအကြိမ်မြောက...
ဖေ့ဘွတ်မှာပဲ လိုက်( Like )ခံရတဲ့အကောင်
စာပေဟောပြောပွဲနှင့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဘုံကထိန်တော်...